Dango bụ ihe mgbakwunye maka kiiboodu maka GIF na emojis | Gam akporosis
Dango, ngwa iji nwee emoticons na GIF na ozi izi ozi gị na ngwa keyboard
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Hazie gam akporo, Nkuzi
Ebe ọ bụ na ndị GIF ndị na-eme egwuregwu mere ka ha dị na Telegram, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị anyị na-ahapụ ụfọdụ na ndị enyi anyị na kọntaktị anyị iji mee ka anyị chịa ọchị, gosipụta mmetụta uche n'ụzọ ọzọ ma ọ bụ gosipụta ntachi obi kachasị ọhụrụ nke otu n'ime ndị a ma ama na-agbanye TV na ụwa niile. Ihe na-eme bụ na ọ bụghị ngwa ngwa izi ozi niile nwere ikike izipu GIF dị egwu ma ọ bụ ụfọdụ emoticons gosipụtara dị ka ọ na-eme na WhatsApp, opekata mpe n'akụkụ GIF. Anyi bukwa n’oge otutu ulo oru dika Google na Apple na eweputa “smarts” ma obu “smart” ihe ndi n’eme ihe banyere ozi anyi ziga ma nwekwa ngwa ohuru a na akpo Dango.
Dango bụ ngwa zuru oke dị ka mgbakwunye iji zipu gifs GIFs na nke kachasị egosipụta emoticons na nke ọ bụla izi ozi ma ọ bụ ngwa mgbasa ozi mmekọrịta ị nwere na gam akporo gị. Ndị otu mebere ngwa ahụ bụ Minuum, kiiboodu enweghị ihe karịrị otu ahịrị ma nye ya ahụmịhe dị iche na ndị ọzọ. Ya mere, ka anyị kwuo na Dango bụ mgbakwunye ma ọ bụ "tinye-na" maka keyboard gị ka ị nwee ike ịchọ GIF kachasị ọchị ma malite emojis ndị kachasị mma. Ma ọ nwere arụmọrụ "smart" ekele na ntanetị ntanetị nke ọ na-eji iji jikọta okwu na ụdị ọdịnaya ahụ ị nwere ike ịmalite site na ngwa ngwa ozi gị.
1 Nzọụkwụ mbụ na Dango
2 Ihe mgbakwunye na Dango na-adọrọ mmasị
Nzọụkwụ mbụ na Dango
Oge ị malitere ngwa, Dango ga-ajụ gị ị nweta ikikere dị iche iche dị ka nnweta ka inwee ike “gụọ” ihuenyo ma mara mgbe ọ ga-apụta. The ọzọ ikike bụ inwe ike "ise n'elu" n'elu ngwa nke ị nwere ike iji ya nanị ọrụ.
Anyị na-aga site na obere nkuzi nke akọwapụtara anyị etu Dango si arụ ọrụ: ị pịnyere ozi, pịa akara ngosi Dango ma họrọ ụfọdụ emojis ndị pụtara. Dango kwa ghọta ihe ị na-ekwu na kọntaktị gị, ya mere, mgbe ị na-ede ahịrịokwu ụfọdụ ọ ga-atụ aro ụfọdụ emoticons. Naanị nkwarụ bụ na ike a na-arụ ọrụ naanị n'asụsụ Bekee, yabụ anyị ga-echere ka emelitere ya iji nwee nkwado Spanish.
Ntọala nke Dango na-enye anyị ohere ịgbanwe ụfọdụ ntọala dịka ịkwụsị ngwa ahụ na ụfọdụ ụfọdụ, rụọ ọrụ nnọchi okwu ma ọ bụ oke metụtara iji data. Okwu mgbanwe nke okwu n’enyere anyị aka gbanye na akpaka emoji mgbe a pịa ya mgbe cursor nọ na njedebe nke okwu.
Ihe mgbakwunye na Dango na-adọrọ mmasị
Ma ebe ị pụrụ irite uru bụ na ike izipu animation gifs na ngwa na i nwere na-adịghị na-enye nkwado na nke ahụ bụ ebe ọ nwere ike na-abata nnọọ kemfe ọ bụla ụdị ọrụ. Mgbe ịmalitere ngwa keyboard, Dango ga-apụta n'akụkụ aka nri ka ị nwee ike pịa ya wee malite GIF na-emegharị anya mgbe ịchọchara site n'ụdị ya dị iche iche. Enwere ike itinye akara ngosi sere ese na ohere ọzọ na ihuenyo ahụ iji hazie ahụmịhe ahụ.
Dango ọrụ nke ọdịdị dị iche iche dabere na ngwa ahụ. Na Telegram, izipu GIF na-arụ ọrụ zuru oke, ebe na WhatsApp enwere ahụhụ na-eziga GIF mgbe niile anyị họọrọ n'otu otu. Nke ahụ kwuru, a ga-eziga vidiyo na ngwa a, ebe WhatsApp anaghị anabata izipu GIF. Na Slack, dịka ọmụmaatụ, banye na URL nke GIF iji gosipụta nlele ahụ na akpaghị aka dịka ọ na-eme na adreesị ndị ọzọ.
Ojiji a ga - adị iche ma ọ bụrụ na ngwa ahụ na - enye nkwado maka GIF ndị na - emegharị ahụ na ọ nwere ike ịnwe aka ịnweta ụdị ọdịnaya ndị ọzọ nke ụdị a iji malite ngwa ngwa ozi ịchọrọ. anyi nwere olile anya na ha na-edozi njehie dị ka nke na-eme na WhatsApp na ya mere anyị nwere ike nweta ọtụtụ n'ime ya na ngwa kachasị eji n'oge ahụ n’elu ụwa dum.
Ngwa a adịghị na mpaghara, mana ị nwere ike nweta ngwa mgbe ahụ
Budata APK nke Dango
Dango ?? - Emoji & GIF
Developer: Onye Enyemaka Emoji
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Hazie gam akporo » Dango, ngwa iji nwee emoticons na GIF na ozi izi ozi gị na ngwa keyboard
Etu esi dezie PDF na ụzọ dị mfe na gam akporo
Ihe 5 ohuru nke iOS 10 nke anyi nwereworị na gam akporo